Ukukhusela iBrand yakho kunye negama kuThengiso lwe-imeyile ezineZatifikethi zeMark eziQinisekisiweyo (VMCs) | Martech Zone
Abathengisi be-imeyile bayaqonda ukuba umkhankaso ophumeleleyo umalunga nokuhambisa kunye nokuthumela imiyalezo. Imalunga nokubandakanya amathemba kunye nokwakha ubudlelwane abanokubukhulisa ekuhambeni kwexesha. Ngokusisiseko, olo lwakhiwo lobudlelwane luqala ngegama kunye nentembelo kuhlobo lophawu:
Uninzi lwabathengi (iipesenti ezingama-87) zabathengi behlabathi bathi bayayithathela ingqalelo inkampani xa bethenga imveliso okanye inkonzo.
Igama kunye neTrust zichaphazela njani iZigqibo zokuThengwa kunye nokuSebenza ngokuThengisa
Kodwa ukugcina ukuthembeka kwebrendi kwihlabathi elikwi-intanethi akukho lula, ngakumbi xa imeko yengozi yokhuseleko lwe-cyber itshintsha ngokukhawuleza. Ukuhlaselwa ngobuqhetseba, ugaxekile, kunye nezinye izoyikiso ziyanda, kwaye abadlali ababi baya beba krwada ekusebenziseni imimandla efanayo:
I-22% yolwaphulo-mthetho lubandakanya ubunjineli kwezentlalo- i-96% yayo ifike nge-imeyile.
Idatha yokwahlulahlula yedatha ye2020
Ngaphandle kwezi zisongelo ziguqukayo, i-imeyile iyaqhubeka nokudlala indima ebalulekileyo kwintengiso, ngakumbi emva kwesifo sehlabathi:
I-80% yabathengisi iqaphele ukwanda kokuzibandakanya nge-imeyile kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo.
Izibonda ziphezulu, kwaye izoyikiso ze-imeyile azinakukubeka abathengi emngciphekweni kuphela kodwa zisingela phantsi ukuzithemba kwiimveliso zeshishini-ngakumbi ukuba uhlaselo olusebenzisa ubuqhetseba luyaphumelela.
Ngokudibeneyo, ii-VMCs, i-BIMI, kunye ne-DMARC yokuPhucula iTrust ye-imeyile
Ukunceda amashishini akhusele iimveliso zawo kwindawo eyoyikisayo yanamhlanje, iqela elisebenzayo le-imeyile kunye neenkokheli zonxibelelwano ziphuhlisile Izikhombisi zeBrand zokuchonga uMyalezo (IBIMI). Lo mgangatho we-imeyile uvelayo usebenza kunye Izatifikethi zeMark eziqinisekisiweyo (VMCs) ukuvumela iinkampani ukuba zibonise iilogo zazo ngaphakathi kwabaxhasi be-imeyile abaxhasiweyo. Okufana nokujonga uphawu oluhlaza okwesibhakabhaka ku-Twitter, ilogo eboniswe nge-VMC inika umamkeli ithemba lokuba i-imeyile iqinisekisiwe.
Ukulungela ukusebenzisa i-VMC, imibutho kufuneka inyanzelise Ubungqina boMyalezo osekwe kwiDomain (DMARC). I-DMARC ngumgaqo-nkqubo wokuqinisekisa nge-imeyile kunye neprotocol yokunika ingxelo ejolise ekuncedeni ukukhusela imibutho ekubeni imimandla yayo isetyenziselwe uhlaselo njengokuphamba, ubuqhetseba, kunye nokunye ukusetyenziswa okungagunyaziswanga. Abaxhasi be-imeyile bayisebenzisa ukuqinisekisa ukuba i-imeyile ivela ngokwenene kwisizinda esichaziweyo. I-DMARC ikwabonelela ngemibutho ephuculweyo ukubonakala kwimiyalezo ethunyelwa kwi-domain yabo, enokonyusa ukhuseleko lwabo lwangaphakathi lwe-imeyile.
Ngokusebenzisa ii-VMC ezikhuselwe yi-DMARC, abathengisi babonisa abathengi ukuba umbutho wabo ujolise ekuthatheni inyathelo ukuqinisekisa ubumfihlo babathengi, kunye nokhuseleko lwe-imeyile olomeleleyo. Oku kuthumela umyalezo onamandla malunga nokuzibophelela kwabo kwiimpawu kunye nodumo lwabo.
Ukukhanyisa ukuKhanya kwiiNtengiso zoThethathethwano
Ngokubonisa ilogo yombutho kanye kwibhokisi yomamkeli, ii-VMCs kunye ne-BIMI ayibonisi kuphela isibonisi sokuthembela esibonakalayo kodwa ikwabonelela ngendlela entsha enokunceda iinkampani ukuba zisebenzise ngokupheleleyo ukulingana okuqokelelwe kwi-logo yazo, kutyalo-mali oluncinci. Ngokwenza ukuba abathengi babone uphawu oluqhelekileyo kwibhokisi yabo engenayo ngaphambi kokuba bavule i-imeyile, abathengisi bafumana ithuba lokusika ingxolo kwibhokisi engenayo kwaye bashiye uphawu lweempawu. IiLogo ziimpawu ezinamandla ezihambelana nabathengi kwaye zinceda ekuqinisekiseni ukungqinelana, ukusebenzisana okuhle. Iziphumo zokuqala ezivela Izilingo ze-Yahoo zeposi ze-BIMI ngamakhulu abathathi-nxaxheba ayethembisa, kwaye i-imeyile eqinisekisiweyo yaboniswa ukuphucula ukubandakanyeka malunga neepesenti ezili-10.
Ii-VMCs nazo zibiza kakhulu ngenxa yokuba zakhelwe ijelo le-imeyile imibutho esele ityale imali kuyo kwaye yaphuhlisa kule minyaka idlulileyo.
Ii-VMC zifuna ubuDlelwane be-IT
Ukuthatha ithuba le-VMCs, abathengisi kufuneka badibane namasebe abo e-IT ukuqinisekisa ukuba umbutho wabo uyayithobela imigangatho yokunyanzeliswa kwe-DMARC.
Inyathelo lokuqala kukuseta iNkqubo-sikhokelo yoMgaqo-nkqubo wabaThumeli (i-SPF), eyilelwe ukuthintela iidilesi ze-IP ezingagunyaziswanga ekuthumeleni ii-imeyile kwiziko lakho. Iqela le-IT kunye nentengiso liya kudinga ukuseta i-DomainKeys Echongiweyo ye-imeyile (i-DKIM), imigangatho yokuqinisekisa nge-imeyile esebenzisa ukufihla ukhiye woluntu / wabucala ukunqanda ukuphazamiseka kwemiyalezo xa besendleleni.
Emva kokuba la manyathelo egqityiwe, amaqela abeka i-DMARC endaweni yokujonga ukugcwala kwe-imeyile, ukuvelisa iingxelo, kunye nokubonelela ngokubonakala kwimiyalezo ethunyelwe kwi-domain.
Ukuseka ukuthotyelwa kwe-DMARC kunokuthatha iintsuku okanye iiveki, kuxhomekeke kubungakanani benkampani. Nangona kunjalo, ekugqibeleni inceda imibutho yomeleze ukhuseleko kubasebenzisi, izikhusele ngokuchasene nenani elikhulu lohlaselo lobuqhetseba, kwaye ilungele umbutho kwisitifiketi se-VMC. Iindidi ze blogs kunye nezinye izixhobo ezikwi-Intanethi ziyafumaneka ukunceda imibutho ukuba ilungele i-DMARC.
Njengoko izatifikethi ze-VMC zisamkelwa ngokubanzi ngabathengisi be-imeyile, kusenokwenzeka ukuba abathengi kunye nethemba kungekudala baya kulindela uphawu oluqhelekileyo kwiibhokisi zabo ze-imeyile. Iinkampani ezithatha amanyathelo okuqala ukucwangcisa i-VMC kunye ne-DMARC namhlanje ziya kuzimisa ukuba ziphume phakathi kwesihlwele kwaye ziqinisekise abaphulaphuli bazo ukuba benze ukhuseleko kwindawo yokuqala. Ngokudibanisa ukuthembela kulo lonke unxibelelwano nge-imeyile, baya kuqhubeka ukomeleza uphawu lwabo kunye nodumo nkqu nangamaxesha otshintsho.
Khuphela isiKhokelo sokuThengisa seVMC sikaDigicert
tags: IBIMIidiskertI-DMARCUbungqina boQinisekiso loMyalezoungqinisiso lwe-imeyilelogo ye-imeyileukuthemba i-imeyilelogo yebhokisi engenayoubuqhetsebaInkqubo-sikhokelo yomgaqo-nkqubo womthumelispfiziqinisekiso zentengiso eziqinisekisiweyovmcvmc izatifikethi
Uliqala njani iphulo lokuTyikitya kwe-imeyile eliPhumeleleyo (i-ESM)